i-lufthansa ikhofi yokunyathelisa ikhofi China Manufacturer
Incazelo:Coffee Ripple Singapore,I-Lufthansa Coffee Printer,Indlela yokusebenzisa i-3d Coffee Maker
Home > Imikhiqizo > Iphrinta yokudla > Iphrinta yeBiscuit > i-lufthansa ikhofi yokunyathelisa ikhofi
I-Model No.: RFCA3
Ubuciko be-Latte buyathandwa eminyakeni embalwa edlule, futhi njalonjalo, abantu bathola izindlela zokuhamba ngenhla nangaphezulu kwalokho okudalwe ngaphambili.
Okokuqala kwakukhona ubuciko obuhle bokubukwa kwe-latte obudalwa ngokukhethekile ngabadwebi bekhofi abanamakhono. Kwabe sekukhona ubuciko be-3D latte okwenza kubonakale sengathi buyikho
ukuphumula ngaphandle kwenkezo. Manje ubuciko be-latte buye kwayiswa kwenye yezinga. Le phrinta yekhofi entsha ingashicilela ubuso bakho, noma yisiphi isithombe,
ku ikhofi yakho (ngokusekelwe esithombeni osilayishayo).
Manje ukudla kwethu iphrinta ye-flatbed iyathandwa yikhasimende ngezinzuzo [umklamo ohlukile, ukusebenza okulula nokukhiqiza okuphumelelayo,
ubuntu, ukutshalwa kwezimali okuncane kanye nenzuzo ephezulu " Abafunayo uthando bangakwazi ukuya ku- [Espresso Wakho" e-Boxpark, bakhethe umuntu abafisa, bese
babheke ubuso babo kwi-froth yekhofi yabo yamahhala. Indebe iqukethe ulwazi ngomuntu, futhi uma uthanda lokho okubonayo lapho
kuyinto isixhumanisi sokuxhumana nabo. Isitolo sekhofi eShoreditch, eLondon, sithatha ubuciko be-latte esinye isinyathelo ngokuqhubekayo ngokusebenzisa i-tech yokunyathelisa ye-3D ukuze ifane
Umshini we- cappuccino owenziwe ngokuzenzakalelayo womshini we- singapore onomsebenzi we-WIFI, ukukhiqizwa okuvela ku-Ant-
Inkampani yokuphrinta ekhethekile kwi-digital food printer. Njengoba le phrinta yokudla kungekhona nje kuphela ongayiprinta
ikhofi, kodwa futhi ikhekhe, ushokoledi, i-macaron, amakhukhi, i-candy, i-marshmallow njalonjalo.
I-printer ikhofi ye-lufthansa isebenzisa i-ink edible eyakhelwe i-home and shop printer ngekhanda lokunyathelisa kwezomnotho, kuwukuthi
okwenzelwe amakhasimende ezingeni lokungena nezitolo zekhofi. Ukusebenza okulula, isivinini esiphakeme sokuphrinta 20second
indebe ngayinye. Izindleko eziphansi zizodonsela amaklayenti amaningi ukuba eze. Izokusiza ukuheha amakhasimende amaningi.
indlela yokusebenzisa ikhofi ye-3d eklanyelwe ikakhulukazi amade amade, ama-frothy beer on tap, ikhofi yobuciko obu - 3d uzokwenza zonke ikhekhe wena
Iphrinta yekhofi yezithombe dgt iyinaphrinta eguquguqukayo eneza izithombe ezinhle kakhulu zokuxazululwa kwemibono nemilayezo ezithombeni eziphuzayo, kusukela ku-lattes kuya ku ikhofi eyenziwe nge-nitro ne-cocktails.
Thola ubuciko nge- Refinedecolor 3d umshini wekhofi - kukhona okuthile kuwo wonke umuntu nangokwakho
njalo. Dala ukuxhumana okujabulisayo phakathi kwabangane on night game noma usizo imibhangqwana aphule ice
ngobusuku busuku. Amathuba angapheli.
Izigaba zomkhiqizo : Iphrinta yokudla > Iphrinta yeBiscuit
Ikhofi edayayo edlalwayo i-printer ink Xhumana Nanje
I-Refinecolor ithenge ikhompiyutha yekhofi Xhumana Nanje
umshini wokwenza ikhofi we-latte Xhumana Nanje
Hlela kabusha umshini wekhompiyutha wephrinta Xhumana Nanje
Hlela kabusha umshini wekhofi we-3d Xhumana Nanje
i-lufthansa ikhofi yokunyathelisa ikhofi Xhumana Nanje
I-RFC 3d intengo yomakhi wekhofi Xhumana Nanje
Phrinta iphrinta yekhofi yekhofi yokuphuza Xhumana Nanje
Iphrinta yekesi yefoni ephelele ye-A3 uv ephelele
Coffee Ripple Singapore I-Lufthansa Coffee Printer Indlela yokusebenzisa i-3d Coffee Maker I-Coffee Ripple Maker I-Selfie Coffee yaseSingapore Coffee Ripple Maker Inani Image Coffee Ripples I-Coffee Printer Software